China Capsule PET Bhuruu fekitori uye vagadziri | Qianduo kavha
Yakakwira yakazvimiririra kurongedza. Yakakwira yekupatsanurwa kurongedza ndiko kushandiswa kwezvinhu zvine yakanyanya kusarudzika kudzora gasi uye mvura mhute. Hwema, mwenje, nezvimwewo mupakeji kuti uone kushanda kwemishonga. Yakakwira yekupatsanurwa kurongedza kwave kushandiswa zvakanyanya muEurope neJapan. Nekudaro, China yakaunza PVDC uye imwe yakanyanya kupatsanurwa kurongedza kubvira 1980s, asi kukura kwayo kunononoka. Naizvozvo, kukura kwepamusoro kwekuzviparadzanisa zvinhu zvekurongedza chiito chikuru chemishonga inoshanduka kurongedza muChina;
Zvakajeka zveMishonga yeMishonga Pet Mabhodhoro
1. High voga kuputira. Yakakwira yekupatsanurwa kurongedza ndiko kushandiswa kwezvinhu zvine yakanyanya kusarudzika kudzora gasi uye mvura mhute. Hwema, mwenje, nezvimwewo mupakeji kuti uone kushanda kwemishonga. Yakakwira yekupatsanurwa kurongedza kwave kushandiswa zvakanyanya muEurope neJapan. Nekudaro, China yakaunza PVDC uye imwe yakakwira yekuzviputira kurongedza kubvira 1980s, asi kukura kwayo kunononoka. Naizvozvo, kukura kwepamusoro kwekuzviparadzanisa zvinhu zvekurongedza chiito chikuru chemishonga inoshanduka kurongedza muChina;
2. Kunyangwe iyo yakachena nharaunda yekugadzirwa kwezvinodhaka inorongwa zvinoenderana nezvinodiwa neGMP, fomu reyero haigone kuve isina kuchena mukugadzira nekurongedza. Naizvozvo, kuti tiwedzere hupenyu hwesherufu uye tivimbise kuchengetedzwa kwekushandisa zvinodhaka, isu tinofanirwa kubvuma antibacterial polymer kurongedza zvinhu zvekurongedza zvinodhaka maererano nezvinodiwa neGMP, kuti tidzore kusvibiswa kwebhakitiriya, inozovewo imwe yenzira chinodhaka chinoshanduka kurongedza;
3. "Green" kurongedza. Iko "girini" kurongedza kwemishonga kunongedzera kurongedzo iyo isingakuvadze kune zvakatipoteredza nharaunda uye hutano hwevanhu, uye izvo zvekurongedza zvinogona kudzokororwa. Mushure mekumisikidzwa kwe ISO1400 standard, kuvandudzwa kwe "green" kurongedza chave chinhu chakakosha. Mune ramangwana, isu tichava takasununguka kuvandudza uye kazhinji kutora nyowani yekudzivirira kwekuchengetedzwa kwepaketi zvinhu zvakadai sekushandisazve, kudzikisira, kudzokera kune zvakasikwa, kuvesa uye pasina kusvibiswa kwemhepo;
4. Pasina kuyera kurongedza. Pasina metering kurongedza kunoda kuti yemukati kurongedza kwemishonga ine basa reyero kuyera, kusanganisira iko kuiswa kwepakeji zvinhu zvine metering mhedzisiro uye imwe-nguva yekushandisa kurongedza, uye iyo yekupedzisira ndiyo yakajairika mashoma mashoma metering kurongedza. MuUnited States, kurongedza kamwe-nguva kwave kushandiswa zvakanyanya mu1990.Nekuvandudzwa kwezvinhu zvinoumbwa pamwe nekukura kwaJun kurongedza tekinoroji, China yakakwanisa kuvimbisa zvakaringana kunyatso kujeka kwemvura uye yakasimba kamwe-nguva kurongedza, asi ichaenderera ichikura diki yekuyera kurongedza, iri nyore uye chaiyo.
5. Zvemutemo mutemo kurongedza. Izvo zvinonzi "nharaunda yekugadzirisa kurongedza" ndeyekushandura gasi mamiriro mune kurongedza uye kuvimbisa mhando yezvakarongedzwa zvigadzirwa kwenguva yakareba, senge kurongedza kwakavharwa nedesiccant (okisijeni inobata), uye kurongedza pamwe nemuchadenga kutsiva ( nitrogen kuzadza, nezvimwewo).
6. Kuvhara kwepasipo. "Aseptic" kurongedza chinhu chakakosha chekuuraya Jun uye kuputira zvinodhaka mu "aseptic" nharaunda nekutora pakarepo kupisa kwakanyanya kuuraya Jun tekinoroji. Zvinoumba zvinhu zvinowanzo shandiswa kuona akasiyana mamiriro e extrusion uye anoumbwa kuumbwa kwepakeji. Iine zvakanakira kubatana kwakanaka kwezvinodhaka zvemishonga, kuwedzera pasherufu hupenyu, kuchengetedza simba, yakaderera kurongedza mutengo, zviri nyore kuona kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nezvimwewo. Iyo serialization yemushonga yekurongedza zvinoreva kuti mishonga inogadzirwa nemugadziri mumwe chete inogamuchira iyo yakabatana uye yakafanana kurongedza zvinhu. Semuenzaniso, blister kurongedza inogona kusarudza shanduko yeplate saizi uye aluminium foil pikicha kusvika kune akateedzana kurongedza. Nekuitwa kweOTC muindasitiri yemishonga yeChina, serial Packaging iri kuramba ichikosheswa, uye icharatidzawo kugona kwayo mune ramangwana kukura kwekushanduka kwemapakeji emishonga;
7. Nano kurongedza. Iko kunyorera uye kusimudzira kweanotechnology uye nanomaterials mundima yemishonga inopa mukana wegoridhe wekuChina mushonga kurongedza. Kukura kwe nanopaper, polymer based nanocomposites (pnmc), nanoadhesives uye nanoantimicrobial kurongedza kunozovhura nzvimbo nyowani dzemishonga inoshanduka kurongedza.
Pashure: Kamudzira Bhodhoro PET Nhema
Zvadaro: Capsule Bhodhoro PET Brown